Semalt अध्ययन: SEO एकीकृत डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिको रूपमा
अनलाइन व्यवसायहरूलाई इन्टरनेटमा उपस्थिति चाहिन्छ। अन्यथा, ग्राहकहरू केवल गल्ती वा सरासर जिज्ञासा द्वारा उनीहरूको वेबसाइट भ्रमण गर्ने थिए। स्टोर द्वारा प्रयोग गरिएको नाम, यसको लोगो र उत्पादनहरूले जानकारी प्रदान गर्दछ जुन ग्राहकलाई पहिचानको लागि सम्बन्धित हुन सक्छ। समान जानकारी मौलिक हुन्छ जब यो जानकारी राख्ने कुरा आउँदछ जुन व्यवसायको वेब उपस्थिति सिर्जना गर्दछ। अनुकूलित वेबसाइटहरूमा जानकारी छ जुन छनौट गर्न सजिलो छ, र धेरै ग्राहकहरूले तिनीहरूलाई कम प्रयासको साथ फेला पार्न सक्दछन्।
इन्टरनेटको अनुभव १ billion अरब भन्दा मासिक खोज छ। सर्च ईन्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) को स्थापना जुन मूलत: सजिलो खोज्ने वेबसाइट हो जुन अनलाईन व्यवसायका लागि प्रमुख डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिको रूपमा काम गर्दछ।
एसईओ को माध्यम बाट, व्यवसायले आफ्नो ग्राहकहरु लाई यसको वेबसाइटमा ड्राइभ गर्न सक्दछ साइटको लागि त्यहाँ के छ खोज्नको लागि कम्पनीको राजस्व बढाउँदै। यो प्राप्त गर्न सकिन्छ जब फर्मले खोज ईन्जिन नतिजा पृष्ठमा एक स्थिर उच्च रँकिंग पाउँछ। नि: शुल्क विज्ञापन र प्रति क्लिक भुक्तान सिफारिश गरिएका केही उत्तम विधिहरू हुन्।
एन्ड्र्यू दिहान, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, एकीकृत डिजिटल मार्केटिंग रणनीति को महत्वपूर्ण तत्व प्रदान गर्दछ जुन प्रत्येक अनलाइन व्यापारलाई आवश्यक छ।
SEO कसरी काम गर्दछ
SEO ले खोज ईन्जिनहरूको प्रयोग गर्दछ जसको उद्देश्य क्रल, स्क्यान, अनुक्रमणिका भण्डार र निम्नानुसार एल्गोरिदम प्रयोग गरेर रिकभरीहरू गर्ने हो।
कुञ्जी शब्दको पुनरावृत्तिले विशेष वेब पृष्ठको प्रासंगिकता बढाउँदछ।
२. मेटा ट्यागहरू:
खोज इञ्जिनहरूले सामग्री कागजात मूल्यांकन गर्न मेटा ट्यागहरू द्वारा प्रदान गरिएको HTML कागजातको मेटाडाटा प्रयोग गर्दछ।
Website. वेबसाइट सामग्री:
गुणस्तर सामग्री जसले प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्दछ अधिक व्यक्तिलाई अपील गर्दछ र तिनीहरूलाई साइटमा निर्देशित गर्दछ।
B. इनबाउन्ड लिंकहरू:
वेबसाइटमा सन्दर्भित अन्य वेबसाइटहरूमा हाइपरलिंक्स अधिक ट्राफिकको लागि साइटको उच्च श्रेणीकरण दिन्छ।
अनुक्रमणिका, क्रोलि,, खोज इञ्जिन एल्गोरिदम, र पुन: प्राप्तिमा जानकारीले एसईओ संयन्त्रको अझ अन्तर्दृष्टि बुझ्ने क्षमता प्रदान गर्दछ।
क्रॉलरहरू वा स्पाइडरहरू सफ्टवेयर हुन् जसले वेब खोजी गर्दछ ईन्डेक्सिंगका लागि व्यवस्थित वेब ब्राउज गर्न खोज इन्जिनहरू द्वारा पछि सूचनाको छिटो र कुशल छनौट प्रदान गर्न। क्रॉलरले दैनिक आधारमा इन्टरनेट सामग्रीको बारेमा अद्यावधिक जाँच गर्दैन, तर यसले खोज इन्जिनहरूद्वारा द्रुत प्रशोधनको लागि खोजी, डाउनलोड गरिएको र भ्रमण गरिएका स्थानहरूमा सम्झना र सूची राख्दछ।
स्पाइडरले क्रल गरिएको सामग्रीको पृष्ठहरूको डाटाबेस सिर्जना गर्दछ। सूचकांकहरू जुन मूल रूपमा डाटाबेस हुन्छन् वेब साइटहरू र वेब पृष्ठहरूको बारेमा खोजी प्रदान गर्दछ जुन खोजी ईन्जिनले ब्राउज गरेको थियो। अनुक्रमणिकाको सामग्रीको पुनःप्राप्ति कुञ्जीशब्दहरू र सम्बन्धित स्ट्रिंगहरूको माध्यमबाट हुन्छ। SEO सही हुनुपर्दछ यदि खोज इञ्जिनले वेबसाइट बुझ्नु पर्दछ।
खोज इञ्जिन एल्गोरिदम
खोज ईन्जिन एल्गोरिदमले वेब पृष्ठको प्रासंगिकता परिभाषित गर्ने अद्वितीय सूत्र र नियमहरूको सेट समावेश गर्दछ। तिनीहरूसँग वास्तविक पृष्ठ पहिचान गर्न सक्ने क्षमता छ वा यदि वेब सामग्रीसँग उपयोगी जानकारी भएमा प्रयोगकर्तालाई आवश्यक पर्दछ।
एसईओ उपचार वेब पृष्ठ को खोज प्रक्रिया को अन्तिम चरण एक जटिल प्रक्रिया हो कि खोज सामग्री को एक समझ को लागी र प्रासंगिक अनुक्रमणिका र सर्वरहरु संग मिल्छ। अन्त्यमा, खोज इञ्जिनले कागजातहरूको सूची पुन: प्राप्त गर्दछ जुन कुञ्जीशब्दहरू र स्ट्रिंग प्रयोगको लागि मिल्दछ।
एसईओ को उपयोग, तसर्थ, एक खोज इञ्जिन द्वारा सजीलो पुन: प्राप्ति को लागी खोजी को शीर्ष मा एक विशेष वेबसाइट को जानकारी को उपलब्धता को सुविधा। एसईओ मार्केटिंग रणनीति धेरै लागत-कुशल छ किनकि यसले खोज ईन्जिनका लागि वेब पृष्ठहरूको सामग्रीलाई हेरफेर गरेर ई-वाणिज्य गर्ने व्यवसायको दृश्यता प्रस्तुत गर्दछ।